आलमले प्रहरीकै अगाडि दिए मान्छे मार्ने र आगो लगाउने धम्की (भिडियाेसहित) - Birgunj Sanjalआलमले प्रहरीकै अगाडि दिए मान्छे मार्ने र आगो लगाउने धम्की (भिडियाेसहित) - Birgunj Sanjalआलमले प्रहरीकै अगाडि दिए मान्छे मार्ने र आगो लगाउने धम्की (भिडियाेसहित) - Birgunj Sanjal
२ मंसिर २०७६, सोमबार २२:४३
काठमाडाैं | रौतहटको राजपुर बमकाण्डका अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद महमद अफ्ताव आलमले प्रहरीकै अगाडि मान्छे मार्ने र आगो लगाउने धम्की दिएको पाइएको छ ।
नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल (न्यूज २४) लाई प्राप्त २ मिनेट २४ सेकेन्डको भिडियोमा आलमले प्रहरीकै सामु जिल्लामा आगो लगाइदिने र मान्छे मार्ने धम्की दिएका छन् ।
न्युज २४ लाइ प्राप्त यो भिडियोमा आलमले राैतहट जिल्ला नै अशान्त पार्ने भनेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले प्रहरीलाई नै धम्क्याएका छन् । उनले आफूलाई पक्राउ गरेर ठूलो गल्ती गरेको भन्दै आफू छुटेपछि एसपी भूपेन्द्र खत्री र डीएसपी नविन कार्कीलाई हत्कडी लगाउने धम्की दिएका छन् । भिडियाेमा उनले ‘भारतबाट मानिस…’ र ‘मेराे भारतबाट…’ भनेर समेत उच्चारण गरेका छन् तर त्याे बाेलि प्रस्ट सुनिँदैन
हेर्नुहाेस्- भिडियाेमा सुनिएकाे संवादकाे एक अंश–
आलमः तपाईंले मलाई ठट्टा ठान्नु भा’छ ?
प्रहरीः कहाँ हामीले ठट्टा ठानेका छौं हजुर ? माननीयज्यूलाई हामी सम्मान गर्छौं । जयनेपाल, नमस्कार भनेका छौं ।
आलमः (गाडीमा हात बजार्दै) हँ… ? यो जिल्लामा आग (आगो) लाग्छ, आग ।
प्रहरीः शान्तिसुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्नु तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो नि ।
आलमः यो जिल्लामा आग लाग्छ । तपाईं हेर्दै जानुस् । भारतबाट मानिस…
प्रहरीः त्यस्तो भन्न मिल्दैन हजुर ।
आलमः मैले वारात (विवाह) बाट आउँछु भनेर रिक्वेस्ट गरेँ । म तपाईंको के हो ? म डकैत हुँ ? डकैतको व्यवहार गर्नु भा’छ तपाईंले ।
प्रहरीः हैन माननीयज्यू ।
आलमः अब जिल्लाभर अशान्ति हुन्छ । आगो लाग्छ ।
प्रहरीः माननीयज्यू, अशान्ति हुन्छ, आगो लगाउँछु, मान्छे मार्छु भन्न कहाँ मिल्छ ?
आलमः हँ… एकदम हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।
प्रहरीः त्यसो भन्न हुँदैन हजुर ।
आलमः (प्रहरीतर्फ औंला ठड्याउँदै) तपाईं र एसपीलाई हत्कडी लगाउँछु ।
प्रहरीः ठीक छ, ठीक छ । म जेल जान तयार छु । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दा हजुरले जेल पठाउनुहुन्छ भने हामी जान्छौं ।
आलमः अब असहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी तपाईं र एसपीले लिनुपर्छ ।
प्रहरीः शान्तिसुरक्षा गर्ने दायित्व हजुरको पनि हो ।
आलमः तपाईंलाई के हुन्छ भन्ने त मेरो वकिल आउँछ अनि थाहा हुन्छ ।
प्रहरीः बरू को वकिल हुनुहुन्छ, हामी बोलाउन सहयोग गर्छौं । मर्जी होस् हजुर ।
आलमः (चर्को बाेल्दै) हैन, मलाई तपाईंले जुन व्यवहार गर्नुभयो, त्यसको भुक्तभोगी तपाईं र एसपी हुनुहुन्छ ।
प्रहरीः हामीले त सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं हजुर ।
आलमः होइन, त्यसका लागि पुलिस लिएर जान मिल्छ ? मेरो भारतबाट…
प्रहरीः माननीयज्यूलाई सम्मानसाथ जयनेपाल, नमस्कार गरेर यस्तो आदेश छ हजुर भनेका छौं ।
आलमः होइन, तपाईंहरुले डकैतजस्तो व्यवहार गर्नुभयो । यही चोक (राजपुर/इन्द्रिस गेट) मा हजारौं मानिस जम्मा
हुन्छन् अब ।
प्रहरीः केका निम्ति हजुर ? हामीले त सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेका हौं । अब अदालतले फैसला गर्छ, भीडले होइन । हजुरको पक्ष ‘स्ट्रङ’ छ भने त्यसरी जाउँ न हजुर ।
आलमः होइन, तपाईं दुइटा पुलिस राखेर… (शब्द प्रष्ट बुझिँदैन) गर्नुभएको छ, यसको भुक्तभोगी (जिम्मेवार) तपाईंहरु बन्नुहुनेछ ।
प्रहरीः हजुरले मलाई कहाँ दोष दिन मिल्छ र ? हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । हामी सामान्य कारिन्दा मात्रै हौं ।
आलमः हैन, हैन.. ।
प्रहरीः हजुरहरुले नै बनाएको कानुन कार्यान्वयन गरेका हौं ।
आलमलाई कात्तिक १८ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राैतहटले कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण कसुरमा ३० वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कात्तिक २९ गते न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान हुने आदेश दिएको छ । आलम आदेश पछि नख्खु कारागारमा छन् । आदेश लगत्तै न्यायाधीश ढकाल र न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवाल रौतहटबाट राति नै प्रहरी ‘एस्कर्टिङ’ मा काठमाडौं आउनुभएकाे छ ।